Somalia: Shati bixinta barta ugu xiisaha badan baarista shidaalka xeebaha Afrika | Caasimada Online
Home Warar Somalia: Shati bixinta barta ugu xiisaha badan baarista shidaalka xeebaha Afrika
Somalia: Shati bixinta barta ugu xiisaha badan baarista shidaalka xeebaha Afrika
Aqoonyahanta Karyna Rodriguez oo ah ku xigeenka madaxa fulinta ee qaybta “Geosciences” ee shirkadda TGS, oo sahminta khayraadka Soomaaliya qayb ka ahayd, ayaa tiri: “Waxaan runtii aragnaa in dhammaan xeebaha Soomaaliya ay ceegaagto saliid”.
February 7da, 2019 Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay macluumaadkii ugu dambeyay ee sahminta “Juba-Lamu Basin, Coriole Basin, Obbia Basin.” Walow siyaasiyiinta mucaaradka ay dhaliileen qorshahaas, haddana shidaalka dhulka la baaray oo keliya ceegaaga waxaa lagu qiyaasay inuu dhan yahay 30 bilyan fuusto, kaas oo soo jiitay indhaha shirkadaha shidaalka ee caalamka.
Shirkadihii horey u heystay qandaraaska baarista iyo soo-saarista shidaalka dalka waxay ku dul fariisteen khayraadka dalka, ayagoo ku marmarsiinyooday qaddar Eebbe “force majeure”.
Intaas waxaa dheer, in intii Soomaaliya ay ka maqnayd beesha adduunweynaha (dowladnimada), dunida horumar weyn ka gaartay tabaha soo saarista shidaalka, gaar ahaan teknologiyada ay adeegsadaan shirkadaha ka hawlgala aagagga shidaalka sida Schlumberger, Halliburton iyo Baker Hughes oo ku takhasusay soo saarista shidaalka ugu badan ee suurtagalka ah.
War laga soo xigtay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in shirkadda Schlumberger oo hormuud u ah shirkadaha ka hawlgala aagga ay ku jirto saliid tayo sare leh ay daneyneyso Soomaaliya. Schlumberger ma aha shirkad shidaal, waxayse u adeegtaa shirkadaha waaweyn ee saliidda caalamiga ah.